Nezvedu | Yiwu Sungnan Imp & Exp Co, Ltd.
isu tiri kambani yakasimbiswa, iine hurumende yose yaida magwaro uye rezinesi rekutengesa kunze. Isu takatsaurirwa kuunza vatengi vedu nehunhu hwebasa uye isinganetsi-yemahara dhora chitoro zvigadzirwa zvishoma.
Nemakore ekushanda, isu tine anopfuura zana ane hushamwari akabatana akabatana mafekitori, vatengesi vakavimbika uye zvinopfuura 1000 zvakasarudzika zvakasarudzwa zvinhu zvekushandisa zvinoratidzwa nemifananidzo uye zvakadzama kutaurwa. Zvese zvigadzirwa zvatinotakura zvinotengeswa pasi rose uye zvinozivikanwa.
Chii chinoita SUNGNAN kusiyanisa kubva kuboka
Yakasarudzika uye kukosha-kwakawedzerwa sevhisi
Yakasimba mhando yekudzora timu
Inogara ichiwedzera Chigadzirwa Kuunganidzwa
Makomputa manejimendi manejimendi
Yedu bhizinesi modhi inoenderana nekugutsa zvinodiwa nevatengi vedu vakasiyana pasirese, uye nekupa mhinduro dzakanangana nemisika yega. Mirairo ingave diki kana hombe saizi inogamuchirwa yese uye ichagadziriswa zvakanyanya uye nehunyanzvi. Vashandi vedu vanofara pakudaidzira kwako kubvunza, kurongeka kubata, kudhinda zvinodiwa pamwe nechitsva chigadzirwa kutsvaka.
Isu tine zvakadzama kunzwisisa kukosha kwehunhu hwechigadzirwa. Yedu QA timu yakatsaurirwa kuongorora, panguva yekugadzira kana kana zvinhu zviri kuuya kudura redu, zvine chekuita nebasa, kurongedza, kunyora mazita, kudhinda, huwandu, wepasi rose kutevedzera zvinoenderana maererano neQL kana zvinodiwa nevatengi.
Yedu yehunyanzvi yekutenga boka iri isingaregi kutsvaga zvinhu zvitsva uye zvinokwezva, izvo zvinokuchengeta iwe nguva dzose sechiyero pakati penzvimbo yako yemusika.Uye isu zvakare tine yedu pachedu dhizaini rine makore eruzivo mune yekufungidzira maitiro, kushambadzira, vanachipangamazano vefashoni, stylists, nezvimwe.
SUNGNAN inotora zvakakwana zvoga, makomputa manejimendi manejimendi. Nesisitimu ino, yedu yekutengesa cheni uye yega yekutengesa inonyatso kutarisirwa, inobudirira inodzorwa uye yakarongeka. Izvo zvinoitawo kuti vatengi vedu vatevedze kugadzirwa uye kuendesa chinzvimbo chezvinhu zvakarairwa.